ဒီလိုအချစ်မျိုးကို တစ်ခြားဘယ်သူစိမ်းဆီကများ ရနိူင်အုံးမှာတဲ့လဲ ? – Alanzayar
ဒီလိုအချစ်မျိုးကို တစ်ခြားဘယ်သူစိမ်းဆီကများ ရနိူင်အုံးမှာတဲ့လဲ ?
ပီတိမျက်ရည်တွေနဲ့ ငိုပါရစေ သားတစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေနေတဲ့ မွေးရပ်‌မြေ ‌တောရွာလေးကို အလည်ပြန်လာတယ် ။ဒါပေမဲ့ သူဟာ ခွင့်၂ ရက်ပဲရခဲ့လို့ တစ်ညတည်းအိပ်ပြီး နောက်‌နေ့မနက် ‌စောစော ၆ နာရီလောက် မြို့ကားအမှီ ထပြန်ရမှာပါ။
အဲ့ဒီည သားအမိနှစ်ယောက်သား ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ အလုပ်အကိုင်အ‌ကြောင်းတွေကို ထိုင်‌ပြောကြရင်း ညဉ့်တော်တော်နက်သွားတယ် ။သွားမအိပ်ခင်လေးမှာ သားဖြစ်သူဟာ သူ့အမေကို နောင်တကြီးစွာနဲ့‌ ပြောတာက “အမေရယ်…. သား ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရတာ အရမ်းကို အလောတစ်ကြီးနိုင်လိုက်တာ။
နောက်တစ်ခါဆို သားအမေနဲ့ အကြာကြီးနေလို့ရအောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ သားလေ အမေလုပ်ကျွေးတဲ့ ငှက်ပျောမုန့်ဖက်ထုပ်ကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ။ဘယ်မှာပဲဝယ်စားစား အမေ့လက်ရာကို လုံးဝမမှီဘူး “သားရဲ့အ‌ပြော‌ကြောင့် အမေ့ရဲ့မျက်နှာမှာ ပီတိတွေနဲ့ ပြုံးသွားတယ် ။ ‌
ပြောပြီး‌တာနဲ့ သားဖြစ်သူဟာ မနက်ကျ သူစောစောထရမှာမို့ အမေ့ကိုနုတ်ဆက်ပြီး အိပ်ခန်းဆီ သွားခဲ့တယ် ။သားဖြစ်သူ သွားအိပ်ပြီးတဲ့နောက် အမေဖြစ်သူဟာ မအိပ်ချင်တော့ဘူးလို့ ခံစားရတယ်။
သူမဟာ သူမအခန်းဆီလျှောက်သွားပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ သူမခင်ပွန်းကို သွားနှိုးတယ် ။ “အဖိုးကြီးရေ ….. ထပါအုံး။ရှင်ရွာထဲသွားပြီး ငှက်ပျောရွက်နဲ့ ဖီးကြမ်း အမှည့်တစ်ဖီးလောက် သွားရှာပြီး ‌တောင်းဝယ်လာခဲ့စမ်းပါ။
ရှင့်သားက ငှက်ပျောမုန့်ဖက်ထုပ် စားချင်ရှာလို့တဲ့။ အဲ့တာ မနက်စောစော သူ မပြန်ခင်လေး လုပ်ကျွေးလိုက်ချင်လို့ “အိပ်ပျော်နေရာက နိုးလာတဲ့အဖိုးကြီးဟာ သူ့မိန်းမကို ပြန်ပြောတယ် ။
“အေ,.. ငါအခုပဲ သွားရှာလာလိုက်မယ် ” တဲ့ ပြောပြီး ထလာရင်း တိုင်မှာချိတ်ထားတဲ့ အနွေးထည်အနွမ်းလေးကို ကောက်စွပ်တယ် ။”အဖိုးကြီး…… ရှင်သွားရင် ‌ဖြေး‌ဖြေးလျှောက်သွား။ တံခါးလည်း ဖွဖွလေးပဲ စေ့ထားခဲ့။ သားလေးခမြာ ခုလေးတင်မှ အိပ်ပျော်သွားတာ။ မနက်ကျ အစောကြီးထရအုံးမှာ။
တော်ကြာနိုးသွားရင် အိပ်ရေးမဝရှာပဲ နေလိမ့်မယ်။ ကျုပ်လဲ ဟိုဖက်အိမ်က လက်လှည့်ဆုံမှာကောက်ညှင်း သွားကြိတ်ထားလိုက်အုန်းမယ်” တဲ့ ခုချိန်ဟာ ဆောင်းဝင်နေပြီဆိုတော့ အပြင်မှာ ရာသီဥတုက အေးနေပြီ ။ အဖိုးအိုဟာ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် လိုက်အော်နှိုးရင်း ငှက်ပျော ဖက်နဲ့ ငှက်ပျောခိုင် တောင်းဝယ်တယ် ။
ရွာမှာက ငှက်ပျောပင် မစိုက်ကြဘူး။ ရှိတဲ့အိမ်ကျတော့လည်း ဖီးကြမ်းငှက်ပျော မဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အဖိုးအိုရဲ့ကြိုးစား‌မှု့ကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ ရွာထိပ်က အိမ်မှာ မှည့်ခါစဖီးကြမ်းတစ်ခိုင် ရှာဝယ်လို့ ရသွားတယ် ။”ညကြီးမင်းကြီး ဘယ်သူများလဲလို့….. အဘ ဦးလှိုင်မောင် ကိုး …. ငှက်ပျောခိုင်က မနက်ဈေးမှာ သွားရောင်းမလို့ ခုတ်ထားပြီးသား။ ငှက်ပျောဖက်ကတော့ မခုတ်ရသေးဘူး။ အဘလိုချင်ရင် ခြံနောက်မှာ လိုသလောက် ခုတ်ယူသွားလိုက်ပါ” လို့ အိမ်ရှင်က‌ပြောတယ် ။
ခြံဟာ အိမ်နဲ့တော့ သိပ်မဝေးပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ နှင်းတွေရွဲနေတဲ့ မြက်တောမှာ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ ညှပ်ဖိနပ်လေးနဲ့ ဖြတ်လျှောက်ရတာ သိပ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။အဖိုးကြီးဟာ အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ ည ၁၀ နာရီ ကျော်နေပါပြီ။
လင်မယားနှစ်ယောက်သား ငှက်ပျောဖက်တွေကို ဆေး‌ကြောကြပြီး မုန့်ထိုင်ထုတ်နေကြတော့ ည ၁နာရီ ကျော်သွားပါပြီ။ အမှန်ဆိုရင် အဲ့ထက် စောစော ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မီးထွန်းပြီး လုပ်နေကြရင် သူတို့သားလေး နိုးသွားမှာစိုးလို့ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့ထိုးပြီး တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ထုပ်‌နေကြတာပါ ။
၂နာရီလောက်ကျတော့ ငှက်ပျောဖက်ထုပ်တွေ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဟာ ခဏလောက် မှေးအိပ်လိုက်ကြဖို့ ‌ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ခဏနေရင် မုန့်ဖက်ထုပ်တွေ ပေါင်းရတော့မဲ့အတူတူ မနိုးမိပဲနေသွားမှာစိုးလို့ မအိပ်ကြတော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ရွာဦးကျောင်းက အုန်းမောင်းသံသဲ့သဲ့ကြားတော့ မုန့်ထုပ်တွေကို မီးဖို‌မှာ တင်‌ပေါင်းကြတယ်။မကြာပါဘူး ၅နာရီခွဲတော့ သားဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းက နှိုးစက်မြည်သံနဲ့အတူ သူတို့သားလေးဟာ နိုးလာပြီး အိပ်ရာတွေသိမ်း အထုတ်အပိုး‌တွေ ပြင်တယ်။
အဲ့အချိန်မှာ မုန့်ဖက်ထုပ်နံ့လေးဟာ သင်းပျံ့ပြီး သူ့ရဲ့နှာခေါင်းဝကို ရောက်လာတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အမေ့လက်ရာ မုန့်ဖက်ထုပ်ကို သတိရသွားရင်း”ဘယ်အိမ်ကများ စောစောစီးစီး မုန့်ဖက်ထုပ် လုပ်နေတာပါလိမ့်…. မွှေးလိုက်တာ ” လို့ တွေးမိတယ် ။
သူ အခန်းထဲကထွက်လိုက်တော့ အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဟာ မုန့်ထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကို ၂ယောက်သား မထွက်လာတာနဲ့ လာဆုံနေတယ်။အမေဖြစ်သူဟာ သူ့သားကိုတွေ့တော့ “လာ…. လာ ငါ့သား…. မုန့်တွေအခုပဲ ပေါင်းအိုးထဲကထုတ်လာတာ။ ပူပူနွေးနွေးလေး ဖြစ်နေတုန်း အရင်လာစားလိုက်။
ပြီးတော့မှ သွားတိုက်လို့ရပါတယ် “အ‌ဖေဖြစ်သူကလည်း “ဟုတ်တယ်….. ပူပူနွေးနွေးဖြစ်နေတုန်း လာစား။ မင်းအမေက မင်းကို အရမ်းစားစေချင်နေတာ။” ဆိုပြီး မုန့်တွေ ပန်းကန်ထဲထည့်ရင်း ကမ်းပေးတယ်။သူဟာ အငွေ့တစ်ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ မုန့်ပန်းကန်ကို လှမ်းယူရင်း သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကို မယုံနိုင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ လှမ်းကြည့်မိတယ်။
ညက သူ အမေ့ကို ကျေနပ်သွားအောင် ‌မြောက်‌ပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းအတွက်နဲ့ အမေတို့ ဒီလောက်အထိ အသဲအသန် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ သူ မထင်ထားခဲ့မိဘူး။အသက် ၆၀ ကျော်နေတဲ့ အဖေနဲ့အမေဟာသူစားဖို့ မုန့်ဖက်ထုပ်ကို တစ်ညလုံး မအိပ်ဘဲ လုပ်ကျွေးခဲ့ကြတယ်။သူဟာ မုန့်ကို ပါးစပ်က ဝါးနေရင်း အဖေနဲ့အမေကို စိုက်ကြည့်ပြီး မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ် ဒလဟော စီးကျလာ‌တော့တယ်။
ဒီလောကမှာ ကိုယ့်ကို အသက်လောက်ချစ်ပါတယ် ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘယ်သူတွေများလဲနော် ?ကိုယ်ဟာဘယ်လောက်ပဲ လူလားမြောက် ကြီးပြင်း လာတယ်ဆိုဆို မိဘတွေမျက်လုံးထဲမှာ သားသမီးဆိုတာ ချစ်စရာ ခလေးငယ်လေးတွေလိုပါပဲ။ ဘာမျော်လင့်ချက်မှ မထားပဲချစ်တာပါ ။ဒီလိုအချစ်မျိုးကို တစ်ခြားဘယ်သူစိမ်းဆီကများ ရနိူင်အုံးမှာတဲ့လဲ ?Credit to Original Writer
ပီတိမကျြရညျတှနေဲ့ ငိုပါရစေ သားတဈယောကျဟာ မိဘတှနေတေဲ့ မှေးရပျ‌မွေ ‌တောရှာလေးကို အလညျပွနျလာတယျ ။ဒါပမေဲ့ သူဟာ ခှငျ့၂ ရကျပဲရခဲ့လို့ တဈညတညျးအိပျပွီး နောကျ‌နမေ့နကျ ‌စောစော ၆ နာရီလောကျ မွို့ကားအမှီ ထပွနျရမှာပါ။
အဲ့ဒီည သားအမိနှဈယောကျသား ရှေးဟောငျးနှောငျးဖွဈတှေ အလုပျအကိုငျအ‌ကွောငျးတှကေို ထိုငျ‌ပွောကွရငျး ညဉျ့တျောတျောနကျသှားတယျ ။သှားမအိပျခငျလေးမှာ သားဖွဈသူဟာ သူ့အမကေို နောငျတကွီးစှာနဲ့‌ ပွောတာက “အမရေယျ…. သား ဒီတဈခေါကျပွနျလာရတာ အရမျးကို အလောတဈကွီးနိုငျလိုကျတာ။
နောကျတဈခါဆို သားအမနေဲ့ အကွာကွီးနလေို့ရအောငျ ကွိုးစားပါ့မယျ။ သားလေ အမလေုပျကြှေးတဲ့ ငှကျပြောမုနျ့ဖကျထုပျကို အရမျးကွိုကျတာပဲ။ဘယျမှာပဲဝယျစားစား အမလေ့ကျရာကို လုံးဝမမှီဘူး “သားရဲ့အ‌ပွော‌ကွောငျ့ အမရေဲ့မကျြနှာမှာ ပီတိတှနေဲ့ ပွုံးသှားတယျ ။ ‌
ပွောပွီး‌တာနဲ့ သားဖွဈသူဟာ မနကျကြ သူစောစောထရမှာမို့ အမကေို့နုတျဆကျပွီး အိပျခနျးဆီ သှားခဲ့တယျ ။သားဖွဈသူ သှားအိပျပွီးတဲ့နောကျ အမဖွေဈသူဟာ မအိပျခငျြတော့ဘူးလို့ ခံစားရတယျ။
သူမဟာ သူမအခနျးဆီလြှောကျသှားပွီး အိပျပြျောနတေဲ့ သူမခငျပှနျးကို သှားနှိုးတယျ ။ “အဖိုးကွီးရေ ….. ထပါအုံး။ရှငျရှာထဲသှားပွီး ငှကျပြောရှကျနဲ့ ဖီးကွမျး အမှညျ့တဈဖီးလောကျ သှားရှာပွီး ‌တောငျးဝယျလာခဲ့စမျးပါ။
ရှငျ့သားက ငှကျပြောမုနျ့ဖကျထုပျ စားခငျြရှာလို့တဲ့။ အဲ့တာ မနကျစောစော သူ မပွနျခငျလေး လုပျကြှေးလိုကျခငျြလို့ “အိပျပြျောနရောက နိုးလာတဲ့အဖိုးကွီးဟာ သူ့မိနျးမကို ပွနျပွောတယျ ။
“အေ,.. ငါအခုပဲ သှားရှာလာလိုကျမယျ ” တဲ့ ပွောပွီး ထလာရငျး တိုငျမှာခြိတျထားတဲ့ အနှေးထညျအနှမျးလေးကို ကောကျစှပျတယျ ။”အဖိုးကွီး…… ရှငျသှားရငျ ‌ဖွေး‌ဖွေးလြှောကျသှား။ တံခါးလညျး ဖှဖှလေးပဲ စထေ့ားခဲ့။ သားလေးခမွာ ခုလေးတငျမှ အိပျပြျောသှားတာ။ မနကျကြ အစောကွီးထရအုံးမှာ။
တျောကွာနိုးသှားရငျ အိပျရေးမဝရှာပဲ နလေိမျ့မယျ။ ကြုပျလဲ ဟိုဖကျအိမျက လကျလှညျ့ဆုံမှာကောကျညှငျး သှားကွိတျထားလိုကျအုနျးမယျ” တဲ့ ခုခြိနျဟာ ဆောငျးဝငျနပွေီဆိုတော့ အပွငျမှာ ရာသီဥတုက အေးနပွေီ ။ အဖိုးအိုဟာ တဈအိမျပွီးတဈအိမျ လိုကျအျောနှိုးရငျး ငှကျပြော ဖကျနဲ့ ငှကျပြောခိုငျ တောငျးဝယျတယျ ။
ရှာမှာက ငှကျပြောပငျ မစိုကျကွဘူး။ ရှိတဲ့အိမျကတြော့လညျး ဖီးကွမျးငှကျပြော မဟုတျဘူး ။ ဒါပမေဲ့ အဖိုးအိုရဲ့ကွိုးစား‌မှု့ကွောငျ့ နောကျဆုံးမှာ ရှာထိပျက အိမျမှာ မှညျ့ခါစဖီးကွမျးတဈခိုငျ ရှာဝယျလို့ ရသှားတယျ ။”ညကွီးမငျးကွီး ဘယျသူမြားလဲလို့….. အဘ ဦးလှိုငျမောငျ ကိုး …. ငှကျပြောခိုငျက မနကျဈေးမှာ သှားရောငျးမလို့ ခုတျထားပွီးသား။ ငှကျပြောဖကျကတော့ မခုတျရသေးဘူး။ အဘလိုခငျြရငျ ခွံနောကျမှာ လိုသလောကျ ခုတျယူသှားလိုကျပါ” လို့ အိမျရှငျက‌ပွောတယျ ။
ခွံဟာ အိမျနဲ့တော့ သိပျမဝေးပါဘူး ။ ဒါပမေဲ့ နှငျးတှရှေဲနတေဲ့ မွကျတောမှာ မှောငျမှောငျမဲမဲထဲ ညှပျဖိနပျလေးနဲ့ ဖွတျလြှောကျရတာ သိပျတော့ မလှယျလှပါဘူး။အဖိုးကွီးဟာ အိမျပွနျရောကျလာတော့ ည ၁၀ နာရီ ကြျောနပေါပွီ။
လငျမယားနှဈယောကျသား ငှကျပြောဖကျတှကေို ဆေး‌ကွောကွပွီး မုနျ့ထိုငျထုတျနကွေတော့ ည ၁နာရီ ကြျောသှားပါပွီ။ အမှနျဆိုရငျ အဲ့ထကျ စောစော ပွီးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မီးထှနျးပွီး လုပျနကွေရငျ သူတို့သားလေး နိုးသှားမှာစိုးလို့ လကျနှိပျဓါတျမီးနဲ့ထိုးပွီး တိတျတိတျဆိတျဆိတျနဲ့ ထုပျ‌နကွေတာပါ ။
၂နာရီလောကျကတြော့ ငှကျပြောဖကျထုပျတှေ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။ အဖိုးကွီးနဲ့အဖှားကွီးဟာ ခဏလောကျ မှေးအိပျလိုကျကွဖို့ ‌ပွောကွတယျ။ဒါပမေဲ့ ခဏနရေငျ မုနျ့ဖကျထုပျတှေ ပေါငျးရတော့မဲ့အတူတူ မနိုးမိပဲနသှေားမှာစိုးလို့ မအိပျကွတော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ရှာဦးကြောငျးက အုနျးမောငျးသံသဲ့သဲ့ကွားတော့ မုနျ့ထုပျတှကေို မီးဖို‌မှာ တငျ‌ပေါငျးကွတယျ။မကွာပါဘူး ၅နာရီခှဲတော့ သားဖွဈသူရဲ့ဖုနျးက နှိုးစကျမွညျသံနဲ့အတူ သူတို့သားလေးဟာ နိုးလာပွီး အိပျရာတှသေိမျး အထုတျအပိုး‌တှေ ပွငျတယျ။
အဲ့အခြိနျမှာ မုနျ့ဖကျထုပျနံ့လေးဟာ သငျးပြံ့ပွီး သူ့ရဲ့နှာခေါငျးဝကို ရောကျလာတယျ။ သူ့စိတျထဲမှာ အမလေ့ကျရာ မုနျ့ဖကျထုပျကို သတိရသှားရငျး”ဘယျအိမျကမြား စောစောစီးစီး မုနျ့ဖကျထုပျ လုပျနတောပါလိမျ့…. မှေးလိုကျတာ ” လို့ တှေးမိတယျ ။
သူ အခနျးထဲကထှကျလိုကျတော့ အဖိုးကွီးနဲ့အဖှားကွီးဟာ မုနျ့ထညျ့ထားတဲ့အိုးကွီးကို ၂ယောကျသား မထှကျလာတာနဲ့ လာဆုံနတေယျ။အမဖွေဈသူဟာ သူ့သားကိုတှတေ့ော့ “လာ…. လာ ငါ့သား…. မုနျ့တှအေခုပဲ ပေါငျးအိုးထဲကထုတျလာတာ။ ပူပူနှေးနှေးလေး ဖွဈနတေုနျး အရငျလာစားလိုကျ။
ပွီးတော့မှ သှားတိုကျလို့ရပါတယျ “အ‌ဖဖွေဈသူကလညျး “ဟုတျတယျ….. ပူပူနှေးနှေးဖွဈနတေုနျး လာစား။ မငျးအမကေ မငျးကို အရမျးစားစခေငျြနတော။” ဆိုပွီး မုနျ့တှေ ပနျးကနျထဲထညျ့ရငျး ကမျးပေးတယျ။သူဟာ အငှတေ့ဈထောငျးထောငျးထနတေဲ့ မုနျ့ပနျးကနျကို လှမျးယူရငျး သူ့ရဲ့အဖနေဲ့အမကေို မယုံနိုငျတဲ့မကျြလုံးနဲ့ လှမျးကွညျ့မိတယျ။
ညက သူ အမကေို့ ကနြေပျသှားအောငျ ‌မွောကျ‌ပွောလိုကျတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးအတှကျနဲ့ အမတေို့ ဒီလောကျအထိ အသဲအသနျ ဖွဈသှားလိမျ့မယျလို့ သူ မထငျထားခဲ့မိဘူး။အသကျ ၆၀ ကြျောနတေဲ့ အဖနေဲ့အမဟောသူစားဖို့ မုနျ့ဖကျထုပျကို တဈညလုံး မအိပျဘဲ လုပျကြှေးခဲ့ကွတယျ။သူဟာ မုနျ့ကို ပါးစပျက ဝါးနရေငျး အဖနေဲ့အမကေို စိုကျကွညျ့ပွီး မကျြရညျတှေ ပါးပွငျပျေါ ဒလဟော စီးကလြာ‌တော့တယျ။
ဒီလောကမှာ ကိုယျ့ကို အသကျလောကျခဈြပါတယျ ဆိုတာ တကယျတော့ ဘယျသူတှမြေားလဲနျော ?ကိုယျဟာဘယျလောကျပဲ လူလားမွောကျ ကွီးပွငျး လာတယျဆိုဆို မိဘတှမေကျြလုံးထဲမှာ သားသမီးဆိုတာ ခဈြစရာ ခလေးငယျလေးတှလေိုပါပဲ။ ဘာမြျောလငျ့ခကျြမှ မထားပဲခဈြတာပါ ။ဒီလိုအခဈြမြိုးကို တဈခွားဘယျသူစိမျးဆီကမြား ရနိူငျအုံးမှာတဲ့လဲ ?Credit to Original Writer
Previous Article ခွေးများအူလျှင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများ…
Next Article မိဘကျေးဇူးကို အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် သုံးချက်ပဲရှိတယ်…